खै त आधा जनसंख्याको उपस्थिति ?
पश्चिम बंगालमा २९४ मध्ये ४०, राजस्थानमा २०० मध्ये २८, बिहारमा २४३ मध्ये ३४ महिला विधायकको उपस्थिति रहेको अवस्थामा महिला प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा गुजरात निकै पछि देखिन्छ
गुजरात विधानसभा निर्वाचनको परिणाम आगामी दिनमा कस्तो देखिएला ? यसको तस्बिर अब प्रस्ट भइसकेको छ । ९९ सिटमा भाजपाका विधायक बस्नेछन् भने ७७ सिटमा कंग्रेसका विधायक बस्नेछन् । तर, पूरै विधानसभामा केवल १३ महिला अनुहार मात्र तपाईंले देख्नुहुनेछ । जो कुल विधायक संख्याको करिब सात प्रतिशत मात्र हो । गुजरात विधानसभामा २०१२ मा १६ महिला थिए, तर यसपटक उनीहरूको संख्या घटेको छ ।
निर्वाचन मैदानमा महिला
एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्मको तथ्यांकअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा ५७ महिला निर्वाचनको मैदानमा थिए । त्यहीँ दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कुल ६१ महिलाले आफ्नो भाग्य परीक्षण गरेका थिए ।
भाजपा र कंग्रेसजस्ता ठूला पार्टीले त्यति धेरै महिलालाई यस निर्वाचनमा टिकट दिएनन् । गुजरातमा भाजपाका मिडिया संयोजक हर्षका अनुसार भाजपाले १२ महिलालाई निर्वाचनमा टिकट दिएको थियो, जसमध्ये नौ महिलाले जित हात पारेका छन् । कांग्रेसले १० महिलालाई निर्वाचन मैदानमा उतारेको थियो, जसमध्ये चार महिलाले मात्र जित हात पारेका छन् ।
यस निर्वाचनमा महिला विधायकमध्ये सबैभन्दा चर्चित अनुहार कंग्रेसकी आशा पटेल हुन् । उनले उन्झा सिटबाट जित हासिल गरेकी छिन् । उन्झा सिट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहनगर वडनगरमा पर्छ । त्यहाँ भाजपालाई पराजित गर्नु कंग्रेसका लागि पक्कै पनि बढी नै महत्वको विषय हो ।
पछिल्ला दश वर्षदेखि आशा पटेल गुजरातको राजनीतिमा सक्रिय छिन् । बिबिसीसितको कुराकानीमा आशा पटेलले भनेकी छिन्– यो जित मेरो लागि निकै महत्वपूर्ण छ । विशेष रूपमा पछिल्लोपटक मैले यसै सिटमा पराजयको सामना गर्नुपरेको हुनाले पनि यसपटक मेरा लागि यसको निकै ठूलो महत्व थियो ।
यस निर्वाचनमा कैयौँ दिग्गज नेता पराजित भएका छन् । उनीहरूमध्ये एक दिग्गज हुन् गुजरातका स्वास्थ्यमन्त्री रहिसकेका शंकरभाइ चौधरी । कंग्रेसकी गेनीबेन ठाकोरले यस निर्वाचनमा शंकरभाइ चौधरीलाई पराजित गरिन् । गेनीबेन गुजरातको बनासका“ठाको वाव सिटबाट निर्वाचन मैदानमा थिइन् ।
गेनीबेनले बिबिसीसित कुराकानी गर्दै भनेकी छिन्– यो मेरो तेस्रो विधानसभा निर्वाचन थियो । दुईपटकको हारपछि मलाई पहिलोपल्ट जित हात परेको छ । म झुपडीसम्म शिक्षाको विस्तारका लागि यस अवसरको उपयोग गर्नेछु ।
महिलामध्ये भाजपाकी जंखनाबेन हितेशकुमार पटेलले सुरतको चोर्यसी सिटबाट जित हासिल गरेकी छिन् । उनले कंग्रेसका योगेश पटेललाई एक लाखभन्दा बढी मत अन्तरबाट पराजित गरेकी छिन् । महिलामा जंखनाबेनको जितको अन्तर सबैभन्दा बढी हो । जंखनाबेन पछिल्ला दुई वर्षदेखि मात्र सक्रिय राजनीतिमा छिन् ।
जंखनाबेनलाई राजनीति आफ्नो पिताबाट बिरासतमा प्राप्त भएको हो । उनका पिताको निधनपछि उपनिर्वाचनमा पार्टीले उनलाई टिकट दिएको थियो । त्यतिखेर नै उनी पहिलोपटक राजनीतिमा आएकी थिइन् । बिबिसीसित कुराकानी गर्दै उनले बताइन्– मेरो जितमा मेरा पिताका कामको निकै ठूलो योगदान छ । उनका अधुरा काम पूरा गर्नकै लागि म आज यहाँसम्म आइपुगेकी छु ।
कुन राज्यमा महिला विधायक अघि ?
एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्मद्वारा जारी तथ्यांकअनुसार महिला विधायकको प्रतिनिधित्वमा पश्चिम बंगाल, राजस्थान र बिहार सबैभन्दा अगाडि छन् । प्रतिवेदनहरूका अनुसार पश्चिम बंगालमा दुई सय ९४ विधायकमध्ये ४० महिला विधायक छन् । एडिआरको प्रतिवेदनअनुसार राजस्थानमा कुल दुई सय सिटमध्ये २८ महिला विधायक छन् । बिहार विधानसभाका दुई ४३ सिटमध्ये कुल ३४ अर्थात् १४ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति छ । सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तर प्रदेशको विधानसभाका चार सय तीन सिटमध्ये मात्र ३८ महिला विधायक छन्, जुन १० प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । यी सबै तथ्यांकमाथि ध्यान दि“दा महिला प्रतिनिधित्वका विषयमा गुजरात निकै पछि रहेको देखिन्छ ।
कुन पार्टीलाई महिलाको कति मत ?
सेन्टर फर स्टडी अफ डेभलपिङ सोसाइटिज (सिएसडिएस) का अनुसार यसपटक भाजपाका लागि पुरुषको तुलनामा बढी महिलाले भोट दिएका छन् । सिएसडिएसका निर्देशक सञ्जय कुमारका अनुसार प्रत्येक सयमध्ये ५० महिलाले भाजपालाई भोट दिएका छन् । जब हरेक सयमध्ये ४८ पुरुषले मात्र भाजपालाई भोट दिएका छन् ।
तर, कंग्रेसका लागि यसको ठीक उल्टो अवस्था छ । सञ्जय कुमारका अनुसार सयमध्ये ४२ पुरुष र ४१ महिलाले कंग्रेसलाई भोट दिएका छन् ।
(सिंह बिबिसी संवाददाता हुन्)